မဟုတ်သောအဆိပ်သင့်မီးလျှံနှောင့်နှေး ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှ မဟုတ်သောအဆိပ်သင့်မီးလျှံနှောင့်နှေး အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
CHERNG LONG ENTERPRISE CO., LTD. ၏ကျယ်ပြန့်၏ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးပြု မဟုတ်သောအဆိပ်သင့်မီးလျှံနှောင့်နှေး နိုင်ငံတကာစျေးကွက်၏တောင်းဆိုချက်များခရီးဦးကြိုပြုခြင်းငှါ, ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုတင်းကျပ်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအတိုင်းအတာအရဆောင်ရွက်သည်ငါတို့ပုံမှန်ထုတ်ကုန်များမှတပါး, OEM စီမံကိန်းများကိုကြိုဆိုဖြစ်ကြသည်။
ပုံစံ - CL-112
T ကများအတွက်မီးနှောင့်နှေး/R ကိုဖိုင်ဘာ(အရည်)
အထည်အလိပ်၏မီးခံနိုင်ရည်တိုးမြှင့်ဖို့အပြင်,ဒီအေးဂျင့်က MS နှင့်အတူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်-အထည်အလိပ်၏မာကျောမှုတိုးမြှင့်ဖို့ 50 ဗဓေလသစ်.ဤအေးဂျင့်သည်အထည်အလိပ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုညွှန်းကိန်းကိုပိုမိုဆိုးရွားစေပြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်.
၎င်းကို M နှင့်အသုံးပြုနိုင်သည်-အထည်၏ခိုင်မာသောတိုးမြှင့်ဖို့ 50 ဗဓေလသစ်.
ယေဘုယျသောက်သုံးသော 30 ကိုထည့်သွင်းသည်%~50%T ၏ဖြေရှင်းချက်/အဆိုပါ dilution အကြံပေးအဖွဲ့သို့ R ကိုမီးနှောင့်နှေး->ထည် impregnating->roller နှိပ်->ခြောက်သွေ့->အစိုင်အခဲအကြောင်းအရာ 9~15%T ကမှာ=120̊ဂ~180̊20 အဘို့အခြောက်သွေ့သော C~စက္ကန့် ၃၀.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.textileauxiliaries.com.tw/my/non-toxic-flame-retardant.html
အကောင်းဆုံး မဟုတ်သောအဆိပ်သင့်မီးလျှံနှောင့်နှေး ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် မဟုတ်သောအဆိပ်သင့်မီးလျှံနှောင့်နှေး ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ မဟုတ်သောအဆိပ်သင့်မီးလျှံနှောင့်နှေး ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan